धनञ्जय बाँस्कोटा बुधबार, फागुन १९ २०७७
सभ्यताको हरेक समय एउटा न एउटा खोजिमा रुमल्लिरहेको हुन्छ । यो समय पनि एउटा खोजिमा निस्किएको छ, खासथरी नेपाली सभ्यतामा । यही समयको एउटा गाडीमा चढेर हामी पनि निस्किएका छौं खोजीमा । त्यो खोजी एउटा अमूर्त कुराको हो । एउटा असम्भव कुराको ।
सभ्यताको हरेक समय एउटा न एउटा खोजिमा रुमल्लिरहेको हुन्छ । यो समय पनि एउटा खोजिमा निस्किएको छ, खासथरी नेपाली सभ्यतामा । यही समयको एउटा गाडीमा चढेर हामी पनि निस्किएका छौं खोजीमा । त्यो खोजी एउटा अमूर्त कुराको हो । एउटा असम्भव कुराको । एउटा कल्पनाकीको । एउटा सस्तोमा प्रचार गरिएको मूल्यवान कुराको । पाएर पनि थेग्ननसकने कुराको । पाएर पनि बचाउन नसकिने कुराको । पाएर पनि उसैको मान मर्दन गरेर उसैका हत्या गरिने कुराको ।
हामी बाराम्बार त्यसैको कुरा गर्छौं, कहिल्यै अघाउँदैनौं उसकौ प्रसंशा गरेर । उसको नाम लिएपछि ह्यामिलिन सहरका मुसाले मसक बाजा बजाउनेको पछि पछि लावालसकर लागे जस्तो मानिसहरुलाई लस्कर लगाउन सक्छौं । त्यसको पक्षमा बोलेपछि बाँकी कुरा सबै छायामा पार्न सक्छौं । त्यसको राप र तापले त्यसको विरोध गर्नेहरु समाप्त भएर जान्छन्, यसर्थ राजनीतिको यो बजारमा हामी यही पदावलीको दुकान थाप्छौं र भरमाग्दुर नाफामा जान्छौं । बिरासत खडा पाछौं । नत्र २००६ सालदेखि आजसम्म नेपाली राजनीतिको दुकानमा त्यही चिजबाहेक बाँकीकुनै पनि चिज फष्टाएको छैन । बाँकी चिजहरु क्सैले ल्याइहाल्यो भारत, चीन, युरोप वा अमेरिकातिरबाट भने पनि ती टिक्दैनन् । कसले मेरो देश सुहाउँदो भनेर आप्mनै दुकान राख्यो भने उसको पनि चल्दैन । घाटामा जान्छ र टाट पल्टिन्छ ।
आफैले बारबार हत्या गरिरहेको त्यही चिजको खोजिमा मान्छे अनेक नाम र भेषमा सडकमा आइरहेका छन् । तिनका उत्पादन एकै छन्, मात्र ब्राण्ड फरक छन् । र ती फेरि उही खोज्न आइरहेका छन् । हामीलाई पनि लगिरहेका छन् त्यही चिजको खोजीमा । र हामी आनन्दविभोर भएर मेचीकाली गरिरहेछौं । किनभने त्यो चिज हामीलाई प्यारो छ । हाम्रौ त्राण त्यसैमा छ । प्राण त्यसैमा छ । मान त्यसैमा छ । प्रतिष्ठा त्यसैमा छ । राजनीतिको ग्ल्यामर त्यसैमा छ । त्यो चिजको ‘उवाच’ गरिसकेपछि शरीर शुद्ध भयो । मन शुद्ध भयो । विचार शुद्ध भयो । र बाँकीलाई अशुद्ध प्रमाणित गर्याे ।
यस्तो महान चिजको खोजीमा हामी अहिले सडकमा छौं । हर क्षेत्रमा छौं ।
तर हामीले सोचेका छैनौं, हामीले खोजी गरिरहेको चिज हामी नै तातोपानी खन्याएर मुण्डन गरिरहेका छौं ।
हामीले धुईंपताल खोजिरहेको त्यो चिज नै लोकतन्त्र रे । र त्यो हाम्रो गौरवको चिज । यसको उच्चारण गरिसकेपछि बाँकी सबै प्रतिगामी, सबै प्रतिकृयावादी, यथास्थितिवादी, पुनरुत्थानवादी, दलाल, नोकरशाह, भगौडा सबै निघुरमुन्टी न लगाउँछन् । सबैको लक्ष लोकतन्त्रको प्राप्ती रे । यसको संरक्षण र संबर्धन रे ।
आपैmले खोजी गरिरहेको लोकतन्त्र आफैले समाप्त पारिरहेको छ ।
वास्तवमा लोकतन्त्र भनेको अहिले हामीले भनिरहेको र गरिरहेको प्रबृति होइन । लोकतनत्र भनेको रुशोको विचार हो । भोल्टेयरको विचार हो । मन्टेस्क्यूको विचार हो । प्राचिन ग्रीस देखि फ्रान्सेली राज्यक्रान्ती हुदै अहिले ५५ बर्षिय पोल्याण्डकी राजनैतिक दार्शनिक एन्ना एप्लेवमको किताव ‘ट्वीलाइट अभ डिमाक्रशी’अर्थात प्रजातन्त्रको बत्ती कितावसम्म आयपुग्दा हाम्रो प्रजातन्त्र अर्थात लोकतन्त्र उल्टो दिशातिर गइरहेको छ भन्न बाध्य छौं हामी ।
एन्नाले लोकतन्त्र मासेर निरंकुशतन्त्रको उदय भइरहेका एक्काइसौं शताब्दीका लोकतन्त्रलाई कालो पोतो दल्नेहरुको फेहरिस्त देखेकीछन् । उनी भन्छिन्, ‘शक्तिका लागि घाँटी सुकेका तिर्खालुहरु महत्वकांक्षा पाल्छन् । र आप्mनो विरासत गुमाउँदै जान्छन् । सर्वसाधारण पनि उही शक्तिको रापमा उही मनोकांक्षा पाल्न पुग्छन् । र शक्ति आर्जनका लागि जस्ता आन्दोलनहरु पनि गर्न तयार रहन्छन् । परिणाम ती निरंकुश भएर उदाउँछन् ।’
एन्नाले भनेको अवस्था नेपालको पनि हो । लोकतन्त्र भनेर सात दशक लडे, लड्यौं, पटक पटक पायौं पनि । अनि पटक पटक गुमायौं पनि । कारण उही छ, एन्नाले भनेको जस्तो । हामी काम लोकतन्त्र बिरोधी गर्छौं, बोली लोकतन्त्र बिरोधी बोल्छौं, कानूनको धज्जी उडाउँदा मज्जा मान्छौं । आफूलाई महान ठान्छौं । बैज्ञानिक भन्छौं । दिमाग भएका भन्छौं । अग्रगामी भन्छौं । जसले कानुनलाई धेरै भन्दा धेरै पङ्गु बनायो, त्यही बैज्ञानिक बन्छौं । रुशोले भनेका छन्, ‘वी आर अल इक्वेल बिफोर ल’ । हामी कानुको अगाडि सबै समान छौं । छौ त ? उनी थप्छन्, ‘वी सुड अल अवि द लेजिटिमेट पावर अफ द स्टेट’ (हामीले राज्यको बैधानिक शक्तिलाई मान्नु पर्छ)। मनेका छौं त ?
हामीले जतिसक्यो त्यति राज्यको शक्तिलाई नमान्दा महान हुने स्कुलिङबाट प्रशिक्षित भएर आयौं । आनदोलनमा सहभागी एकजना महान मान्छे प्रहरी अधिकिृतलाई हप्काउँदै थियो, ‘भोलिका दिनमा तपाईलाई फुली थपेर बढुवा गर्ने म हो । घटुवा गर्ने पनि म हो । फुर्ति नलगाउनु ।’
केहिदिन अघि रामकुमारी झाँक्रीलाई प्रहरीले भाषिक ब्यावहारको विषय उठाएर पक्रियो र केही समयपछि छाड्यो । उनले गरेको भाषिक ब्यवाहार एउटा सभ्य समाजमा चल्छ कि चल्दैन ? लोकतान्त्रिक समाजमा त्यस्तो बोलिन्छ कि बोलिन्न ? नेपालका टेलिभिजन च्यानलहरुले एक स्वरमा बोले, ‘वाक स्वतन्त्रताको, लोकतन्त्रको किरुद्धमा गएको निरंकुश सरकारको केही लागेन । अन्तत झाँक्री छुटिन् ।’ मलाई ती पत्रकारहरुप्रति दया लागेर आयो । तिनले लोकतन्त्रको कुनै किताव पढेको लागेन र यस्तो परिभाषा लोकतन्त्रको कुनै पनि शास्त्रमा छैन जहाँ वाकस्वतन्त्रता भनेको जे पनि बोल्ने छुट हुन्छ । अघि माथि भनिएका लेखकहरु, लोकतन्त्रका प्रवर्तकहरुले यी पत्रकारको टिप्पणी सुनेका भए कति छक्क पर्थे होलान् ?
लोकतन्त्र भनेको भाषा हो । सभ्यता हो । संस्कार हो । परम्परा हो । पहिचान हो । धर्म हो । सभ्य भाषिक व्यावहार हो । जनताको विश्वास हो । मत हो । चुनाव हो । न्यायलय हो । कानुन हो । लोकतन्त्रमा विश्वास गर्नेले, तयसवाट दीक्षित भएकाहरुले कहिल्यै पनि अरुलाई गाली गर्दैनन् । अझ कसैको चरित्रमा प्रश्न उठाउँदैनन् सार्वजनिक रुपमा । कसैको व्यक्तिगत जीवनको कुरा सार्वजनिक रुपमा उठाउँदैनन् र त्यसलाई राजनीतिको कुरुप बजारमा बिक्रीका लागि लग्दैनन् । तिनले अशल चरित्र देखाउन्छन् । ती कहिल्यै पनि कसंसंग जाइलाग्दैनन् । हिंसामा विश्वास गर्दैनन् । हार्नु र जित्नुलाई सामान्य कुरा ठान्छन् । सत्ताको लागि पागल हुँदैनन् । सनातन परम्परालाई मायाँ गर्छन् । तिनको पहिचानलाई सम्मान गर्छन् ।
एन्नाले आफ्नाे कितावमा डोनाल्ड ट्रम्पले लोकतन्त्रलाई कुरुप बनाउने गरेको प्रयासलाई उल्लेख गरेकी छन् । आसियान मुलुकहरुमा भएका लोकतन्त्र विरोधी घटनाहरु (जस्तै म्यानमार), नेपाल, भारत, पाकिस्तान लगायत धेरै अफ्रिकी मुलुकहरुको हालत त्यही छ । सत्ता र शक्तिका लागि जे पनि गर्न, जे पनि बोल्न तयार हुनु पर्ने राजनैतिक चिन्तनलाई हामी लोकतन्त्र भनिरहेका छौं । अनि लोकतन्त्र भनेको ‘जे पनि बोल्न पाइने, जे पनि गर्न पाईने’ संस्कार पढेको यो हाम्रो कुरुप सयको परिणाम नै त हुन् नि ती पत्रकार पनि ।
लोकतन्त्रको थोरै निथार रहेका शेरबहादुर देउवाले हालै चुनाव भए पनि लोकतान्त्रिक हो, संसद पुनस्थापना भए पनि लोकतान्त्रिक हुन्छ भनेकोबाट लोकतन्त्र र अरुतन्त्रवालवीक कति फरक हुँदो रहेछ भन्ने थाहा हुन्छ । गाली गलौज लोकतन्त्रको संस्कार होइन । देउवाको पार्टीका कतिपय ‘नवक्रान्तिकारी’ हरु अप्राकृतिक विचारको शिकार भएका छन् । ती भाँती मिलोसन न वरोस, क्रान्किकारीको बिल्ला लगाउँछन्, लगाइइरहेका छन् । तिनका भाषा र शैली लोकतान्त्रिक छैनन् । तिनलाई लाग्दो हो, हामी बिपि कोइरालाका अनुयायी हौं । बिपिले हतियार उठाएको कुरा उत्तरार्धमा पश्चात्ताप गरेका छन् । गाँधीवादी भएपछि उनको पहिलो लीला सकिएको छ । तर बिपिको पछिल्लो आयाम उनीहरु पढ्न चाहँदैनन् । जान्न पनि चाहँदैनन् । त्यो लोकतन्त्रको आयाम थियो । त्यसलाई छायाँमा पारेर उनका अघिल्ला राप र तापका आयामहरुको मात्रै व्याख्या गर्छन ।
आज खुला मञ्चबाट कसैको चरित्र हत्या गरिरहेको मानव सभ्यताको सबैभन्दा कुरुप आवाजको दृष्यलाई लोकतन्त्रवाद भनेर भ्रमको खेति भइरहेको छ । र हामी लावा लस्कर लागेर हिंडिरहेका छौं । र दुत्कारिरहेका छौं आफ्नै सुन्दर अनुहारलाई । अनि लोकतन्त्रलाई तातो पानी खन्याएर मरणासन्न पारेर त्यसैको खोजीमा निस्किएका छौं सडकमा हामी अहिले ।